Ogaden News Agency (ONA) – Jigjiga – Adeegyadii oo iswada taagay iyo kooxda Cabdi iley oo is-abaabulaya
Jigjiga – Adeegyadii oo iswada taagay iyo kooxda Cabdi iley oo is-abaabulaya
Posted by ONA Admin	/ October 13, 2012
Geeridii Meles Zanawi iyo intii lagu jiray tacsidiisa ayaa waxaa lala kala cararay hantidii tiilay bangiyada gaar ahaan miisanyadii loogu talagalay waxan ay ugu yeedhaan ismaamulka Somalida ee gobolada Ogadenya. Waxaa la soo sheegayaa inuu nin walba oo qasnad hayay sii faaruqiyay, iyadoo gaar ahaan saraakiisha Wayaanaha ay boobayaan waxay ku arkaan xafiisyada.
Wararka ka imanaya magaalooyinka waaweyn gaar ahaan Jigjiga ayaa sheegaya inay is-wada taageen adegyadii dawladda oo biya la’aan daran ay ka jirto magaalada iyadoo loogu dhaaminayo booyado dadweynaha qofkii iska bixin karo. Waxaa kaloo la sheegayaa inuu sicir bararku gaadhay heer ay adagtahay inuu qofka shaqaalaha ah ku noolaado, iyadoo markii horeba uu raashinka iyo agabyada kale ee laga gato Ogadenya uu sicirkooda 50% ka sareeyay dalalka dariska la’ah.
Mar aan la xidhiidhnay dad shacab ah oo kala duwan, waxay noo sheegeen in kooxdii ku xidhnayd gacan-ku-dhiigle Cabdi Iley ay leeyihiin duurka ayaan galaynaa oo waxaan samaynaynaa jabhad soo dagaalanta hadii heshiis uu ka dhasho wadahadalka Itobiya iyo ONLF uga socda Kenya. Dad xog-ogaal ah oon wareysanay ayaa leh qoraalkii loo diray shabakadaha Somalida waxaa ka dambeeyay Cabdi iley iyo kooxdiisa. Inkastoo aan warar sugan laga haynin arintaa hadana aad ayaa loo hadal hayaa magaalada Jigjiga masiirka Cabdi iley oo aan la ogayn gaar ahaan intii looga yeedhay Adisababa. Warara aan la hubin ayaa sheegaya inuu teleefoonada kula soo xidhiidho kooxdiisa oo abaabul uu halkaa ka wado hadii laga qaado jagada.
Warar badan ayaa la’isla dhex marayaa Ogadenya gaar ahaan magaalada Jigjiga iyado xasilooni darro laga cabsi qabo oo ciidamada ka amarqaata Cabdi iley ay gadood sameeyaan iyo boob ay ku qaadaan dukaamada, taasoo la leeyahay waxaa kula balamay Cabdi iley inay ku dhaqaaqaan hadii laga qaado jagada.